တရုတ် ကုမ္ပဏီ MaxRock Robot သည် ရန်ပုံငွေ အသစ် ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ရရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
Feb 22, 2022, 17:03ညနေ 2022/02/23 00:10:31 Pandaily
အင်္ဂါ နေ့တွင် MaxRock Robotics AI Technology (Beijing) Co., Ltd မှ ကြေငြာ ခဲ့သည်Angel Round နှင့် Pre-A Round Financing ကို ပြီး အောင်လုပ် ပါစုစုပေါင်း ယွမ်သန်း ၁၀၀ နီးပါး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅. ၇၈ သန်း) ။ ဒုတိယအ ကျော့ တွင်အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများမှာ Glory Ventures နှင့် Oriza Holdings, Milestone Investment, Y & R Capital နှင့် Scale Partners အပါအ ၀ င် ပူးတွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများဖြစ်သည်။ ရန်ပုံ ငွေများကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အဖွဲ့ တည်ဆောက် ခြင်း၏ နောက် အဆင့် သို့ အကောင်အထည်ဖော် မည်ဖြစ်သည်။
MaxRock စက်ရုပ် ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် & nbsp ဟုခေါ်သော စမတ် သန့်ရှင်းရေး စက်ရုပ် ကိုတီထွင် နေသည်။ “Aurora One ။” ဤ စက်ရုပ် သည်အဓိကအားဖြင့် ရပ်ရွာ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ အဆောက်အအုံ များကဲ့သို့ အသေးစားနှင့်အလတ်စား အများပိုင် areas ရိယာ များ သန့်ရှင်း ရေးကို ဆောင်ရွက် သည်။ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ များတွင် သန့်ရှင်း ရေး၊ ဖုန် စုပ် ခြင်းနှင့် ကြမ်းတိုက် ခြင်း တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် လူသား များ၏ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်မှုများကို သက်သာ စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် လူသား နှင့် စက် များ၏ ညှိနှိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်း အောက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ပြောင်း မှုကိုသိသိသာသာ မြှင့်တင် ရန်ကူညီ လိမ့်မည်။
Aurora 1 သည် လက်ရှိတွင် ထုတ်လုပ်မှု အကြို အဆင့်တွင် ရှိပြီး Rongchuang ဌာနချုပ် lob ည့် ခန်း၊ Zhongguancun Dongsheng သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဥယျာဉ်၊ Shanshui Plaza နှင့် Beijing Cultural Industrial Park စသည့် ရှေ့ပြေး နေရာများ တွင်အသုံးပြုသည်။
MaxRock စက်ရုပ် သည် Aurora One ကို အဆင့်မြှင့်တင် ရန်စီစဉ် ထားပြီး ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်နှင့် ဖြန့်ဝေ မှု ပမာဏ ကိုတိုးချဲ့ ရန်နှင့် ယခုနှစ် ဒုတိယ နှစ်ဝက် တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် နှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပေးပို့ ခြင်း ကိုစတင် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Chip ကုမ္ပဏီ Tianyi Hexin သည်ယွမ် သန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ သော Round C ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် COVID-19 ဖြစ်ပွား ပြီးနောက် စမတ် အိမ်သုံး ပစ္စည်း အမျိုးအစား တွင် ပေါ်ထွက် လာသော အင်တာနက် ကြယ်ပွင့် ဖြစ်သည့် Sweeper Robot သည် ရောင်းအား မြင့်တက် မှုနှင့် ဆန့်ကျင် နေသည်။ ပြင်းထန်သော ယှဉ်ပြိုင် မှုတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင် မှုနှင့်အတူ ဤ ခိုင်မာသော တိုးတက် မှုသည် ဆက်လက် တည် ရှိနေသည်။ Full-Vision Cloud အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် ကြမ်းပြင် လှည်း စက်ရုပ် များ ရောင်းချ မှုသည် ၂. ၈ သန်း အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး လက်လီ ရောင်းချ မှု မှာယွမ် ၅. ၃ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။
စက်ရုံ အစားအစာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Starfield သည် ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကို အလှည့်ကျ B ရန်ပုံငွေ ဖြင့် ပြီးစီး ခဲ့သည်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း စက်ရုံ အစားအစာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Starfield က ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ စုစုပေါင်း Round B ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။
Startups Jan 12 ဇန်နဝါရီ 13, 2022